Shandong Limeng yakaitirwa pamhemberero yebazi idzva refekitori
Musi waMarch 6, 2019, Shandong Limeng yakaitirwa pamhemberero yebazi idzva repafekitori. Limeng vadyidzani vakapindawo muchiitiko ichi. Kuti kuwedzere kugadzirwa kwekambani uye kuvandudza mamwe mapurojekiti, Limeng Pharm inodyara 1,2 miriyoni mapaundi kutenga gumi maeka nyika. Bazi idzva refekitori wil ...
Musi waChikunguru 28, 2020, iro rakakodzera dhipatimendi reShandong Provincial Chikafu neDrug Administration rakabvumidza wechitatu-bato kuyedza muviri, iyo SGS, yakanga yaongorora Limeng pharm's mhando manejimendi manejimendi, iyo yakavakirwa pasirese HACCP manejimendi system. Iwo mapurojekiti ezvikafu zvinowedzera, dai ...
Rwisai denda iri pamwechete
Manheru eChinese echinyakare Mutambo weChirimo, COVID-19 yakapararira zvine chisimba. Denda rakadai rakabata munhu wese rakakonzera kukuvadza kukuru kumamirioni avanhu. Kubva pakatanga, Shandong Limeng Pharmaceutical Co, Ltd. yanga ichiita zvese zvainogona kugadzira uye kuona ...
NO.18-22 Lashan Road, Shizhong Dunhu, Jinan, Shandong